विराटनगरको एस.एस.एस. जल उद्योग शिलबन्दी – Nirantarkhabar
विराटनगरको एस.एस.एस. जल उद्योग शिलबन्दी
विराटनगर / प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा विराटनगरको पानी उद्योगहरु अनुगमन गरेको छ ।
आज विराटनगरको पाँच वटा पानी उद्योगमा अनुगमनको गरेको हो । मन्त्रालयको नेतृत्वमा निस्कृको अनुगमन टोलीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट खाद्य अनुज्ञापत्र र मापदण्ड समेत पुरा नगरेको विराटनगरको कोचाखालमा सञ्चानमा रहेको एस.एस.एस. जल उद्योगमा शिलबन्दी गरिएको छ । चार वर्षदेखि अनुज्ञापत्र र मापदण्ड समेत पुरा नगरेको पाइएपछि अनुगमन टोलीले उक्त उद्योगमा शिलबन्दी गरिएको प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको उपसचिब गोपिप्रसाद घिमिरेले बताए ।
एस.एस.एस. जल उद्योगले खाद्यले तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेसम्म र अनुज्ञायपत्र नलिएसम्म उक्त उद्योग शिलबन्दी गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयको नेतृत्वमा निस्किएको टोलीले विराटनगर – ५ विशाल चौकमा रहेको शान्ति जल, गंगा यामुना जल उद्योग, गुडलक पानी उद्योग र विराटनगर ५ मा रहेको ग्रेड डे पानी उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनको गरेको मध्ये शान्ति जल उद्योगले मात्र खाद्यले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको पाइएको छ भने अन्य तीन वटा उद्योगले समेत खाद्ययले तोकेको पुरै मापदण्ड भने पुरा गरेको छैन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा निस्किेको अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ताबादी संघसंस्था र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
तस्करीको नयाँशैली : किताबको नाममा गाँजा तस्करी
उपप्रधानमन्त्री भन्छन्– डा. गोविन्द केसीको कार्यशैली अधिनायकवाद
सांसदकै गाँउमा खाेला दाेहन